टी-१० लिगः सन्दीप अहिले सम्मकै उच्च मूल्यमा अनुबन्ध - Everest Dainik - News from Nepal
टी-१० लिगः सन्दीप अहिले सम्मकै उच्च मूल्यमा अनुबन्ध
काठमाडौं, असोज १० । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्रिकेट लिग खेल्न ब्यस्त रहेका नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अर्को सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
सन्दीप संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा हुने नयाँ ‘फर्‍म्याट’ को टी-१० लिगमा केलरा किङ्ससँग सोमबार अनुबन्ध भएका छन् । जुन आर्थिक पाटोबाट हेर्दा उनको क्रिकेट करियरकै अहिलेसम्मको ठूलो छलाङ पनि हो ।
सोमबार भएको खेलाडी अक्सनबाट केरला किङ्सले सन्दीपलाई ३० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ) मा अनुबन्ध गरेको हो । गत वर्ष इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा छनोट भएर दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट खेलेयता सन्दीप निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्रिकेट लिग खेल्न ब्यस्त भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बिग ब्यास लिगमा चम्किए सन्दीप, लिए ३ विकेट !
गत वर्ष सन्दीप आईपीएल अन्तरगत दिल्ली डेयर डेभिल्ससँग २० लाख रुपैयाँ ९३२ लाख नेपाली रुपैयाँ० मा अनुबन्धित भएका थिए । त्यसपछि वेष्ट इन्डिजको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) मा समेत छनोट भएका थिए । उनलाई सेन्ट् किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रिवट्सले पाँच हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपले लिए दोस्रो विकेट, नेपाल जीत नजिक (LIVE)
आईपीएल र सीपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका सन्दीप सबैभन्दा बढी बिदेशी लिग खेल्ने पनि पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । उनी अघिल्लो साता मात्रै युएईमा हुने अफगानिस्तान प्रिमियर लिगका लागि छनोट भएका थिए । अफगानिस्तान प्रिमियर लिगमा उनलाई नान्गहर क्लबले १५ हजार डलरमा लिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस बंगलादेश प्रिमियर लिगः आज प्लेइङ–११ मा पर्लान् सन्दीप ?
सन्दीपलाई आईसीसीसि एशोसियट राष्ट्र अन्तर्गत अनुबन्धन गरिएको थियो । इन्डियन प्रिमियर लिग खेलेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गरेका सन्दीप क्यारेबियन लिगमा समेत छाएका थिए। यसअघि हङकङ र क्यानडामासमेत लिग क्रिकेट खेलेका सन्दीप सबैभन्दा बढी विदेशी लिग खेल्ने नेपाली खेलाडी पनि बनेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
ट्याग्स: sandeep lamichhane, T-10 leauge